10 Shirkadaha caanka ah ee loo yaqaan "Công ty phát triển plugin WordPress '
WordPress wuxuu caan ku yahay dabacsanaantiisa iyo is-dhexgalka fudud. Awoodda WordPress ee ka sarreysa 34% wadarta shabakadaha adduunka. Lambarka ayaa iska hadlaya. Adeegyada horumarinta shabakadda WordPress ayaa lasaarayaa iyada oo ay kor ugu k Cụmso si kasmacal leh.
Istaraatiijiyada isticmaalka CMS iyo saamiyada suuqa (nguồn: W3Tech).
Sababta ugu muhiimsan ee u shaqeysiinta shaqadeeda trang web WordPress waa fureerooyinka. WordPress ayaa awoodda oo dhan ka soo jiidata. Kobcinta Plugin tùy chỉnh WordPress waa dookh kale oo keena awooda website-ka ganacsigaaga.
Trong bài đăng này, Waxaan doonayaa inaan ku siiyaan liis gaar ah oo ka mid ah toban USA shirkadaha horumarinta plugin WordPress ee kaa caawin doona sameynta bogga internetka ee ganacsi oo cajiib ah.
1 Shirkadaha caanka ah ee loo yaqaan Plugin phát triển plugin WordPress ee dalka Mareykanka
1.1 1. Công ty TNHH WordSuccor.
1.5 5. Phim trường Webdev
1.8 8. Tương tác Iskuduwaha
1.9 9. Truyền thông đài phun nước màu xanh
1.10 10. Đánh dấu
Shirkadaha caanka ah ee loo yaqaan Plugin phát triển plugin WordPress ee dalka Mareykanka
1. Công ty TNHH WordSuccor.
WordSuccor Ltd. waa mid ka mid ah shirkadaha horumarinta webka WordPress ee ugu weyn Mareykanka. Markii la aasaasay 2011, wuxuu u korayaa si baahsan oo intaas ka dib, dib uma eegin gadaal. Iyada oo ka sareysa 45 + horumariyayaal khibrad leh, WordSuccor waxay soo gudbisay websaydhka 1.000 oo leh qiime qanacsanaan ah oo ah 98%.
WordSuccor waxay bixisaa adeegyo horumarineed oo horumarineed oo WordPress ah oo ka mid ah taas oo ka heshay caan u ah horumarka WordPress ee horumarinta khaaska ah. Waxay leeyihiin khibrad ku filan oo lagu kobcinayo plugin khaas ah oo kaa caawin kara sidii loo kobcin lahaa shaqeynta bogga ganacsigaaga. Kaalintooda waxaa si gaar ah loogu Talagalay inay la midoobaan ganacsigaaga KPI. Sidaa phi tiêu, sidoo kale sáp soo saar.
Teknolojiyada Varshyl waxaan ku fadhiyaa lambarka laba lambarka liiska. Wa a mid aad u caan ah naqshadaha gaarka ah ee mawduucyada WordPress iyo plugin. Waxay ka shaqeeyaan Milpitas, California – Hoa Kỳ. Waxay sidoo cải xoăn leeyihiin xididada Hindiya iyo Úc. Inkastoo, waxay leeyihiin mawaarinno kala duwan oo ay ku leeyihiin karti-xirfadeedka, haddana horumarinta WordPress-ga ayaa ah sida USP-da.
Tùy chỉnh giải pháp CMS
Waxay có iyo jeer ilaaliyaan diiradda saaraan tayada, asalka iyo farshaxanka farshaxanka ee dhammaan khidadaha caadooyinka ah ee loogu Talagalay gaar ahaan baahiyaha ganacsigaaga.
Macrosoft Inc waa New Jersey oo saldhigeedu yahay IT-da. Waxay si fiican u yaqaanaan adeegyadooda gaar ahaan koritaanka webka WordPress. Hase yeeshee, waxay hadda leeyihiin shaqaale 300, si kastaba ha ahaatee, taasi ma ahan tirada kuwa horumariya. Si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin liis dheer oo macaamiisha ah kuwaas oo ka dhigan horumarka website-ka ilaa horumarka WordPress.
Shirkadu waxay ku fadhidaa suuqa oo ku dhawaad ​​sanadaha 20. Tani waxay siinaysaa faa’iido u leh waayo-aragnimadooda tartanka. Adeegyadooda horumarinta WordPress, waxay bixiyaan adeegyo kala duwan ee horumarinta WordPress. Darajooyinkan waa horumarinta trang web-ka WordPress, horumarinta mawduuca WordPress, Adeegyada dayactirka WordPress iyo horumarka WordPress. Iyadoo khibradda noocaas ah ay leeyihiin aaggan, waxay yihiin doorasho suurta gal ah markaad raadineyso adeegyada horumarinta WordPress.
Baymediasoft waa shirkad horumarineed oo si fi loo og yahay oo Maraykanka ku salaysan. Iyadoo ay ka soo baxayso trong ka badan bogagga 1.800 ee 400 + macaamiisha faraxsan, waxay ku raaxeeysan yihiin doorashada ugu badan ee loogu Talagalay adeegyada horumarinta WordPress. Waxaa si fi loo yaqaanaa trong la siiyo xalal gaar ah oo horumarinta WordPress.
Waxay yihiin xirfadlayaal aad u tababaran oo đã có iyo jeer raadinaya nikwadal kala duwan oo xitaa miisaaniyada yaryar. Horumarintooda xirfadlayaasha ah waxay bixiyaan adeegyo horumarineed ee ugu horumarsan webka oo leh qaabka ugu sareeya.
5. Phim trường Webdev
Liisaska macmiilka ayaa sidoo kale qiimahoodu raadinayaan sidii ay u shaqeyn jireen oo ay u sameeyeen bogagga internetka ee shirkadaha kala duwan ee shirkadaha Xiriirka Discovery Waxay kaloo a vitaminan yihiin trong ay barayaan macaamiishooda.
Tani waa halka ay adeegyadooda horumarinta plugin ay ka duwan yihiin kuwa kale. Ma aha oo kaliya inay sameeyaan plugin, waxay u kobciyaan wakhtiga la siiyey. Xalkoodu cách kala duwanyihiin waana mid aad waxtar u leh.
Codsiyada qiimaha markii ugu horaysay lagu soo bandhigay 2004. Qaybta ugu fiican ee shirkadani waxay tahay inay leeyihiin koox weyn oo ah 450 + horumariye xirfadlayaal ah Tani waxay siineysaa qulqulo waxqabad oo u Horseedaya inay gaaraan alaabo tayo sare leh macaamiishooda.
Waxay leeyihiin macaamiisha 1.500 + macaamiisha faraxsan oo leh qadarin xajisan oo ah 96%. Tani waxay ina tusaysaa sida ay ugu wanaagsan yihiin adeegyadoodu maaddaama macaamiisha ay dooranayaan marar badan.
8. Tương tác Iskuduwaha
Iskuduwaha Tương tác waa shirkad horumarineed oo internet ah oo ku taala Manhattan ee Thành phố New York. Shirkaddu waxay bixisaa naqshado dhammaystiran iyo adeegyo horumarineed kuwaas oo ku xirnaan doona nooca ganacsigaaga.
Waxay kaliya oo aan abuurin shabakadaha laakiin waxay sidoo kale horumarinayaan khidadaha caadooyinka ah ee gaar ahaan loogu Talagalay inay ku siiyaan shaqada aad rabto.
9. Truyền thông đài phun nước màu xanh
Waxay khabiir ku yihiin falanqaynta feylalaha PSD si aad u qurux badan, si fiican loo qoondeeyey mawduucyada WordPress iyo plug-ah WordPress. Iyadoo gargaarkooda, waxaad samayn kartaa website-ka hodanka ah ee hodanka ah ee websaydhka ah oo ku socda wakhti degdeg ah.